Filtrer les éléments par date : mercredi, 30 décembre 2020
mercredi, 30 décembre 2020 20:42
Ron-gisa no nandrasana, ka ron-dasopy aloha no nidirana
Pilo kely : Ron-gisa no nandrasana, ka ron-dasopy aloha no nidirana
Tonga ihany ny fetin'ny faran'ny taona, tsy nety tonga ilay Kaly Tsinjo nampanantenain'ny Filoha hotsinjaraina isam-pokontany manerana ny nosy amin'ny vidiny 100ariary.
Mba ron-gisa hozy ny sasany no ho avy amin'izao fety izao, kay na voam-bary iray aza tsy nisy, ary milaza ny tsy mahalala izany ireo sefo fokontany.
... Dia mbola miafy amin'ny lasopy patte sy ron'akoho 200Ar izany aloha, izay mbola afaka mividy izany, fa miaritra kely fa efa ho avy izy io hozy Rasazy.
mercredi, 30 décembre 2020 18:28
Masoarivo - Belo Tsiribihina : Serza Sefo iray lavo nandritra ny fifanandrinana tamin'ny dahalo
Lavo an'ady androany 30 desambra 2020 raha nifanandrina tamin'ny dahalo tao Ambiky, Kaominina Masoarivo, Distrikan'i Belo Tsiribihina ny Serza Sefo Manjakavelo Gatien, avy ao amin'ny holafy faha 510.
Ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena sy ny Etamazaoron'ny Tafika no nampahafantatra ny vaovao sy naneho ny fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa aminy, ary mankahery ireo rehetra miasa ho an'ny Tanindrazana.
mercredi, 30 décembre 2020 09:58
Fahasalamana : Tena mafy ny manana marary ankehitriny
Tena midera anareo dokotera, infirmièr(e), sage femme, na interne, na ianareo paramed, mpivarotra fanafody sy misehatra amin'ny fahasalamana, eny na ianareo miasa birao aza.
Mafy ary ambavahadin'ny fitomaniana sy tebiteby hatrany ianareo, miantraika aminareo avokoa ny fijaliana sy fahorian'ireo havana, nefa dia tsy arenesam-peo ianareo fa dia manohy miasa mangina, na dia betsaka ny tsikera sy fanakianana, eny lazaina fa ianareo aza indraindray no omena tsiny nahafaty ny havany.
Izaho aza tsy mpitsabo fa maharay hafatra, fitomaniana havana maty efa mila tsy ho zaka, maika fa ianareo miatrika izany isan'andro.
Mba jereo ry fanjakana ity resaka hopitaly sy fandraisana an-tanana ny vidim-panafody sy ny fitaovana fa tsy zakan'ny olona intsony e.
Ny cancer, diabète, foie, rein, coeur, AVC, paralysie, orthopédie, taolana sy kilemaina, ny sida sy ireo areti-mifindra ara-pananahana ary ireo aretina mavesatra mba raiso an-tanana, fa dialyse 3 isan-kerinandro no atao, nefa efa 500 000ar ny dialyse iray, dia ahoana no azakana izany, fa ny aza voany sisa.
mercredi, 30 décembre 2020 09:57
Kitra Malagasy : Nodimandry i Gôly Be
Nodimandry tany Bordeaux Frantsa ny 29 desambra 2020 i Rafalimanana Ferdinand na Gôly Be, ilay mpiandry harato malazan'ny Club M, tamin’ny naha mpanazatra an’i Peter Schnittger.
Nilalao tao amin’ny Fortior de la Côte Ouest sy SOTEMA Mahajanga izy, ary efa nandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy Club M.
mercredi, 30 décembre 2020 09:23
Namorona - Manakara : Polisy kaominaly iray maty an-drano
Lehilahy iray, 65 taona, Polisy kaominaly ao amin’ny Kaominina Namorona, Distrikan’i Manakara, Faritra Vatovavy Fitovinany no latsaka tany anaty rano tao Vinany/Ifotatra Fokontany Vohitrindry ny harivan’ny 28 desambra 2020, raha teny an-dalana hamonjy fodiana.
Natao ny fikarohana fa tsy nahitam-bokatra izany raha tsy ny 29 desambra 2020 tokony ho tamin’ny 5ora sy sasany hariva, saingy vatana efa tsy nisy aina intsony no natsikafon’ny rano tsy lavitra ny toerana nilentehany omalin’io.
Efa nalain’ny fianakaviany ny nofomangatsiakany taorian’ny fanamarinana nataon’ny liben’ny CSB II Namorona teo anatrehan’ny Zandary.
mercredi, 30 décembre 2020 09:21
Manazary- Miarinarivo : Vavikely 4 taona nisy nanolana
Lehilahy iray 46 taona, no voasambotry ny Zandary tao Sahapetra Fokontany Anatroa, Kaominina Manazaryn Distrika Miarinarivon Faritra Itasy ny 28 desambra 2020, nanolana zazavavy kely 4 taona.
Ny 26 desambra 2020 no nanaovany io filan-dratsy ara-nofo io.
Mpirai-monina ihany izy ireo. Rehefa nilalao teo an-tokontany ilay zaza dia notambatambazan’ilay rangahy sakafo ka nanamparany ny filany ara-nofo avy eo.
Natolotra ny fampanoavana ny raharaha ka naiditra vonjy maika ao ampojan’i Miarinarivo ny nahavan-doza.